स्प्रे ड्राई before अघि अल्ट्रासोनिक विस्कोसिटी प्रोटीन सस्पेंशनको कटौती - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
अल्ट्रासोनिक्स दक्षता बढाउन र छद्म स्वादको स्प्रे सुखाने को प्रक्रिया को लागी लागत कम गर्न को लागी समाधान हो, जस्तै डब्ल्यूपीसी।
अल्ट्रासोनिक क्यान्सरले ब्वाँसो समाधानको चिपचिपापनलाई कम गर्छ र यसैले उच्च प्रोटीन एकाग्रताको लागि अनुमति दिन्छ।
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स प्रोटीन समाधान को चिपचिपापन को कमी को लागि उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक्स लागू गर्न को लागि विभिन्न विकल्पहरु प्रदान गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक भिषासिटी कटौती
शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक सेनाहरूले भित्तामा cavitation, उच्च कतरनी बल र थम्बनेल बनाउँछ। हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक्सले ती तीव्र अल्ट्रासोनिक फोर्सहरू प्रयोग गर्दछ कि कलर-थिनिंग स्फुरिरीहरूको द्रव गतिशीलता जस्ता प्रोटीन एकाग्रता, डब्ल्यूपीसी वा बहुलक स्लायर्स जस्ता परिमार्जन गर्न। धेरै स्वाद एक स्प्रे-सुखाने को प्रक्रिया को माध्यम ले अंतिम पाउडर वाला उत्पादन प्राप्त गर्न को लागी जान्छ। स्प्रे-सुखाने एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया हो, जुन उत्पादन लाइनमा अक्सर बोतल-गर्दन हुन्छ। अल्ट्रासोनिक भिषासिटी कमीले समाधानको उच्च कण लोडिङको लागि अनुमति दिन्छ, जसले घटाउनुपर्ने मात्रामा कम मात्रामा जान्छ। यो महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत संग जान्छ। एकै समयमा, स्प्रे-ड्रायरको क्षमता बढि बढि उत्पादनको रूपमा बढेको छ (सुत्ने वजन) प्रशोधन गरिएको छ। स्प्रे ड्रायर को खिलाने को स्ट्रीम को अल्ट्रासोनिक इनलाइन उपचार उच्च एकाग्रता र प्रतिशत ड्रायर को सुखाने को सुलभ को लागि अनुमति दि्छ।
अल्ट्रासोनिक उपचार को प्रभाव:
Homogenization र कण आकार को कमी
इन्टरनेटेड हावा र ओक्सीजन बुलबुले हटाउनुहोस्
प्रोटीनको कम्पैक्शन तह खोल्नुहोस्
अस्थायी रूपमा चिपचिपापन घटाउनुहोस्
प्रोटीन अणु संरेखणमा अस्थायी परिवर्तन सिर्जना गर्नुहोस्
किन स्प्रे सुखाने अघि अल्ट्रासोनिक्स?
अल्ट्रासोनिक भिषासिटी कमी परिणाम कम ऊर्जा खपत र उच्च माध्यमिक।
थप फाइदाहरू छन्:
उत्पादन% 10 वा बढि बढाउँछ
समग्र तय र चर लागत को कमी
चिलिङ्ग आवश्यकताहरू घटाइयो
कम लगानी र वृद्धि मुनाफा
एक वर्ष भन्दा कममा फिर्ता लिनुहोस्
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स को विन्यास र उपयुक्त अल्ट्रासोनिक सिस्टम को स्थापना को गहन ज्ञान छ तपाईंको दक्षता को दक्षता र आउटपुट को अनुकूलन को लागि। उत्पादन लाइनको अनुसार, हेलसेस्टर प्रोटीन समाधानको चिपचिपापनको कमीका लागि उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक्स लागू गर्न विभिन्न विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। हाम्रो सबै औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रणालीहरू माग गरिएका सर्तहरूमा भारी शुल्क अनुप्रयोगहरूको लागि बनाइएको छ र 24/7 चलाउन सक्दछ। तिनीहरूको सानो पदचिन्हको कारण, तिनीहरू सजिलै रेट्रो-अवस्थित उत्पादन लाइनहरूमा फिट गर्न सकिन्छ। कम रखरखाव र प्रयोगकर्ता-अनुकूल अपरेसन थप फाइदाहरू छन्।
आज हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् कि सोनसनले तपाइँको स्प्रे-सुखाने प्रक्रियालाई कसरी सुधार गर्छ भन्ने बारे थप जानकारी प्राप्त गर्न!
UIP2000hdT viscosity reduction को लागि
एम अशोककुमार, जे ली, बी जिसु, आर। भास्करचार्य, एम। पल्मर, र एस केंटिस (200 9): गरम विषय: सोनीकरण प्रोटीन को ताप को स्थिरता बढ्छ। जे डेयरी विज्ञान। 92: 5353-5356।
Mladen Brncic (2014): खाद्य उद्योग मा प्रक्रिया क्षमता मा अल्ट्रासाउंड को प्रभाव। प्रस्तुत गरिएको छ “खाद्य उद्योगमा ट्रान्स” - कोप्रीविनाका, क्रोएशिया, सेप्टेम्बर 5, 2014।
स्प्रे-सुखाने प्रक्रिया बारे
सुखाने स्प्रे एक उत्पादन प्रविधी हो जुन एक द्राइको साथ छिटो सुक्खाएर तरल समाधान वा सुक्खा पाउडरमा घुमाउनु पर्छ। विशेष गरी भोजन र फार्मा क्षेत्रमा, स्प्रे सुक्ने प्रायः तापनि संवेदनशील सामग्रीको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
सुँगुर स्प्रे खाना र फार्मा उद्योगमा प्रायः प्रयोग गरिएको प्रविधि हो जुन सक्रिय यौगिकहरू (माइक्रो एन्कोप्स्युलेसन) को अन्वेषण गर्न।
स्प्रे सुखाने प्रक्रियाले निम्न चरणहरूमा समावेश गर्दछ:
फीडिंग स्ट्रीम: फीडिंग स्ट्रिम एक homogenous, पंप र अशुद्धता मुक्त समाधान, निलम्बन वा घृणा गर्न तयार छ। प्रायः फिडस्ट्रक यो स्प्रे ड्रायर मा तर्नु भन्दा ध्यान केंद्रित गरिएको छ।
परमाणुकरण: परमाणुकरण को समयमा, स्लाइस सानो बूंदों मा बदल दिए। यो atomization को डिग्री सुखाने को दर र यसैले ड्रायर आकार को नियंत्रित गर्दछ किनकी यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रक्रिया कदम हो। सबैभन्दा साधारण परमाणुकरण प्रविधिहरू द्रुत नोजल परमाणुकरण, दुई-तरल नजल परमाणुकरण, र केन्द्रापसारक परमाणुकरण हो। Atomization को समयमा, बूंदों मा निहित पानी को 95% + केहि सेकेन्ड भित्र साफ़ हुन्छ।
सुत्ने: एक हावा हावा वा ग्यास स्ट्रीममा, चिसोले कणको सतहबाट छिटो हटाउदछ।
विभाजन: पाउडर कणहरू चक्रवाट, थम्बनेल, वा इलेक्ट्रोटोस्टोस्ट वर्षाको प्रयोग गरेर नम हावा वा ग्यासबाट विभाजित गरिन्छ।
खाद्यदूध पाउडर, कफी, चिया, अण्डा, अनाज, मसला, स्वाद र स्टार्च डेरिभेटिभहरू, भिटामिन, एंजाइमहरू, स्टिभिया, पोषक निकाय, रङहरू, रोपण निकाय आदि।
औषधि: एंटीबायोटिक्स, चिकित्सा अवयव, additives
औद्योगिक: उत्प्रेरक, रासायनिक उत्पादनहरू, चित्रकारी रंगहरू, सिरेमिक सामग्री, बहुलकहरू, माइक्रोलगगा आदि।